Bit By Bit - dhaqanka loo kuurgalo - 2.2 xogta Big
Macluumaad weyn ayaa la abuuray oo ay ururiyeen shirkado iyo dawlado ujeedo aan ahayn cilmi-baaris. Isticmaalka xogtan si cilmi baaris ah, waxay u baahan tahay in dib loo celiyo.
Sida ugu horeysa ee dad badani ay ula kulmaan cilmi baaris bulsheed ee da 'da' da '' digital 'waxaa loo marayaa waxa badanaa loo yaqaano macluumaad weyn . Inkasta oo isticmaalka baahsan ee ereygan, ma jiro wax isku raacsan oo ku saabsan waxa xogta weyn xitaa ay tahay. Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah qeexdooyinka ugu caansan ee xogta weyni wuxuu diiradda saari doonaa "3 Vs": Volume, Multi, and Speed. Qiyaas ahaan, waxaa jira macluumaad badan, qaabab kala duwan, waxaana si joogta ah loo abuuray. Qaar ka mid ah taageerayaasha xogta waaweyn ayaa sidoo kale ku darsaday "Vs" kale sida Veracity and Value, halka qaar ka mid ah dadka naqdiya ay ku daraan Vs sida Vague iyo Vacuous. Halkii ay ka ahaan lahaayeen 3 "Vs" (ama 5 "Vs" ama 7 "Vs"), ujeedooyinka cilmi bulsheed, waxaan u maleynayaa meel fiican oo ay ku bilaabato waa 5 "Ws": Yaa, Maxay, Xagee, Marka , iyo sababta. Xaqiiqdii, waxaan qabaa in caqabado iyo fursado badan oo ay sameeyeen ilo xogeedyo waaweyn ay ka mid yihiin hal "W": Sababta.
Da'da analogga ah, inta badan xogta loo adeegsaday cilmi-baaris bulsheed ayaa la abuuray ujeedada cilmi-baarista. Si kastaba ha noqotee, da'da dijitaalka ah, tiro badan oo xog ah ayaa waxaa abuuraya shirkado iyo dawlado ujeedo aan ahayn cilmi-baaris, sida bixinta adeegyo, abuurista faa'iido iyo maamul sharciyo. Hase yeeshe, dadka wax soo saarka ah, waxay ogaadeen in aad dib u soo celin karto xogta shirkadaha iyo dawladda ee cilmi-baarista. Fikirka ku soo noqoshada farshaxanka ee cutubka 1, sida Duchamp dib u soo celiyo shay muuqaal ah si loo abuuro farshaxanka, saynisyahannadu waxay hadda dib u soo celin karaan xogta la helay si loo abuuro cilmi-baaris.
Inkasta oo ay jiraan fursado badan oo dib loogu soo celin karo, iyadoo la adeegsanayo macluumaadka aan loo abuurin ujeedooyinka cilmi baarista waxay sidoo kale soo bandhigeysaa caqabado cusub. Isbarbardhig, tusaale ahaan, adeegga warbaahinta bulshada, sida Twitter, sahan dhaqameed dadweyne, sida Sarkaalka Guud ee Bulshada. Yoolalka ugu wayn ee Twitterku waa inay bixiyaan adeega dadka isticmaala iyo inay faa'iido sameeyaan. Daraasada Bulshada Guud, dhanka kale, ayaa diirada saaraya sameynta xog guud oo loogu talagalay cilmi baarista bulshada, gaar ahaan baaritaanka ra'yiga dadweynaha. Farqiga Tani waxay ka dhigan tahay in xogta ay sameeyeen Twitter iyo kuwa ay sameeyeen Sahaminta Bulshada guud ay leeyihiin hanti kala duwan, inkastoo labadaba loo isticmaali karo barashada aragtida dadweynaha. Twitter wuxuu ku shaqeeyaa xajmiga iyo xawaaraha ee Sahaminta Guud ee Bulshada aan la mid noqon karin, laakiin, si ka duwan Siyaasadda Guud ee Bulshada, Twitter ma si taxadar leh u tijaabinayso dadka isticmaala mana u shaqeyn si adag u dhiganta isbarbardhigga waqtiga. Sababtoo ah labadan ilood ee xogtu way kala duwan yihiin, ma macno aheyn in la yiraahdo Baaritaanka Guud ee Bulshada waa ka fiican yahay Twitter ama kan kale. Haddii aad rabto cabiro saacado ah oo heer caalami ah (tusaale, Golder and Macy (2011) ), Twitter ayaa ugu fiican. Dhinaca kale, haddii aad rabto in aad fahamto isbeddelada mudada dheer ee isbedelka dabeecadaha Maraykanka (tusaale ahaan, DiMaggio, Evans, and Bryson (1996) ), ka dibna Sahanka Dadweynaha Guud waa doorashada ugu fiican. Guud ahaan, halkii ay isku dayi lahaayeen in ay ku doodaan in ilaha xogta waaweyni ay ka fiican yihiin ama ka xun yihiin noocyada kale ee xogta, cutubkani wuxuu isku dayi doonaa inuu cadeeyo nooca su'aalaha cilmi-baarista ah ee ilaha xogta ee leh ilaha soo jiidashada leh iyo nooca su'aalaha laga yaabo inayan noqon habboon.
Markaad ka fekereyso ilaha xogta waaweyn, cilmi-baareyaashu waxay si deg deg ah diiradda u saaraan xogta internetka ee ay abuurtay oo ay ururiyeen shirkado, sida qoraallada raadinta iyo warbaahinta bulshada. Si kastaba ha noqotee, diirada saartaa waxa ay ka baxaysaa laba ilo kale oo muhiim ah xogta weyn. Marka hore, ilo xogeed oo badan oo shirkad weyn ayaa ka yimid qalab dijital ah oo ku jira dunida jimicsiga. Tusaale ahaan, cutubkan, waxaan kuu sheegi doonaa daraasad ku saabsan xogta suuq-geynta ee suuq-geynta ah ee loo yaqaan 'supermarket' oo laga baaro sida loo soo saaro wax soo saarka shaqaalaha ee saameyn ku leh wax soo saarka asxaabteeda (Mas and Moretti 2009) . Ka dib, cutubyada dambe, waxaan kuu sheegi doonaa cilmi-baarayaasha isticmaala diiwaanka telefoonka gacanta (Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) iyo macluumaadka biilka ay abuurtay adeegyadda korantada (Allcott 2015) . Maaddaama tusaalooyinkani muujinayaan, ilaha xogta ee weyn ee shirkadu waxay ku saabsan yihiin wax ka badan dabeecadaha online-ka ah.
Qodobka labaad ee muhiimka ah ee xogta weyn ee ay ku fashilmeen diiradda saartey akhbaarta internetka waa xogta ay samaysay dawladaha. Macluumaadka dawladeed, ee cilmi-baarayaasha ku magacaaba diiwaannada maamulka dawladda , oo ay ku jiraan waxyaabaha sida diiwaannada canshuurta, diiwaanada iskuulka, iyo diiwaannada muhiimka ah ee muhiimka ah (tus., Diiwaangelinta dhalashada iyo dhimashada). Dawladaha ayaa abuuray xogo noocan oo kale ah, xaaladaha qaarkood, boqollaal sano, iyo saynisyahanno bulsheed ayaa ka faa'iideysanayay ilaa iyo intii uu jirey aqoonyahanno bulsheed. Si kastaba ha ahaatee, waxa isbedelay, si kastaba ha ahaatee, waa digitization, taas oo si aad ah ugu fududayd dawladaha in ay ururiyaan, gudbiyaan, dukaameeyaan, oo ay falanqeeyaan xogta. Tusaale ahaan, cutubkan, waxaan kuu sheegi doonaa daraasad ah in xogta ka soo baxday miisaaniyaddeeda digital-ka ee magaalada New York si ay ugala hadasho doodda aasaasiga ah ee dhaqaalaha shaqada (Farber 2015) . Ka dib, cutubyada dambe, waxaan kuu sheegi doonaa sida diiwaanka loo soo (Ansolabehere and Hersh 2012) codbixinta ee loo isticmaalay baaritaan (Ansolabehere and Hersh 2012) iyo tijaabo (Bond et al. 2012) .
Waxaan u maleynayaa in fikradda dib-u-celinta ay aasaas u tahay barashada ilaha xogta waaweyn, iyo, ka hor, ka hor intaadan si gaar ah uga hadlin sifooyinka ilaha xogta weyn (qaybta 2.3) iyo sida loo isticmaali karo cilmi baarista (qaybta 2.4), waxaan jeclaan lahaa si ay u bixiyaan laba qaybood oo talo bixin ah oo ku saabsan dib u bixinta. Marka hore, waxay noqon kartaa jahwareer ah in laga fekero khilaafka aan u dhigay sidii u dhexeyn lahaa "xogta" iyo "loo qaabeeyey" xogta. Taasi waa mid dhow, laakiin ma ahan mid sax ah. Inkasta oo, laga eego aragtida cilmi-baarayaasha, ilaha xogta waaweyn ayaa "laga helay," ma aha oo kaliya samada ka dhacaya. Taa baddalkeeda, ilaha xogta "laga helayo" cilmi-baarayaasha waxaa loogu talagalay qof ujeeddo yar. Sababtoo ah "helin" xogta waxaa soo saaray qof, waxaan mar walba kugula talinaynaa in aad isku daydo inaad fahamto inta ugu macquulsan ee ku saabsan dadka iyo geeddi-socodka abuuray xogtaada. Marka labaad, markaad xogta dib u soo celinayso, inta badan waa mid aad waxtar u leh in la qiyaaso datasetka ugu fiican ee dhibaatadaada kadibna isbarbardhig datasetka ku habboon ee aad isticmaalayso. Haddii aadan ururin macluumaadkaaga naftaada, waxaa laga yaabaa in uu jiro faraq muhiim ah oo u dhexeeya waxaad doonayso iyo waxa aad qabtid. Ogaanshaha khilaafaadkan ayaa kaa caawin doona inaad cadeyso waxa aad sameyn kartid iyo aadan ka baran karin xogta aad haysato, waxaana laga yaabaa inay soo jeediso macluumaad cusub oo ay tahay inaad soo qaadato.
Marka aan waayo-aragnimadayda, saynisyahanno bulsheed iyo saynisyahannada cilmiga ah waxay u muuqdaan kuwo soo jiidasho badan si kala duwan. Cilmi-baarayaasha bulshada, oo caadeystey in ay la shaqeeyaan xogta loogu talagalay cilmi-baarista, ayaa badanaa si dhakhso ah u tilmaamaya dhibaatooyinka leh xogta la soo celiyay iyagoo iska indha-tiraya awooddooda. Dhinaca kale, saynisyahannada xogta ayaa badanaa si dhakhso ah u tilmaamaya faa'iidooyinka xogta la soo celiyay iyagoo iska indha-tiraya daciifnimadooda. Dabcan, habka ugu fiican waa gegsi. Taasi waa, cilmi-baarayaashu waxay u baahan yihiin inay fahmaan astaamaha ilaha xogta waaweyn - labadaba wanaagsan iyo kuwa xun-ka dibna ogaan sida loo barto iyaga. Iyo, taasi waa qorshaha inta ka hartay cutubkan. Qaybta soo socota, waxaan ku tilmaami doonaa toban dabeecadood oo wadaag ah ilaha xogta waaweyn. Ka dib, qaybta soo socota, waxaan ku tilmaami doonaa saddex hab oo cilmi baaris ah oo si fiican u shaqeyn kara xogtaas.